merolagani - यि हुन आईपिओ निष्काशनको प्रक्रियामा रहेका कमजोर रेटिङ्गका ५ कम्पनी
कमजोर रेटिङ्ग पाएका पाँच कम्पनीहरुको ९५ करोड ३८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर (आइपिओ) आउने तयारीमा छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डवाट आइपिओ निष्कासनको लागि एक कम्पनीले अनुमति पाइसकेको छ भने चार कम्पनी अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनको लागि स्वीकृत पाइसकेका जोशि हाइड्रोपावर सहित ५ जलविद्युत कम्पनीहरुको आइपिओलाई इक्रा नेपालले कमजोर स्थिति जनाउने ५ ग्रेडिङ्ग रेटिङ्ग दिएको छ ।
आइपिओ निष्कासनको लागि बोर्डमा कमजोर रेटिङ्ग रहेको भैरबकुण्ड, युनिक हाइडेल, युनियन हाइड्रोपावर र शुभम् पावरले आबेदन दिएको छ । त्यस मध्ये युनियन हाइड्रोपावर र शुभम पावरले स्थानियबासिलाई आइपिओ निष्कासन गरी सकेको छ ।
इक्रा नेपालले कमजोर ग्रेड दिएकोले स्थानियलाई निष्कासन गरेको सबै शेयर बिक्रि भएको छैन् । यि दुई कम्पनीले स्थानियले नकिनेको शेयर सहित आइपिओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा आबेदन दिएका हुन् ।
कुन कम्पनीको कति शेयर निष्कासन हुदैछ ?
कमजोर रेटिङ्ग पाएको जोशी हाइड्रोपावर डेभेलपमेन्ट कम्पनीले १६ लाख ९० हजार ४७० कित्ता शेयर निष्कासन गर्ने धितोपत्र बोर्डवाट अनुमति पाएको छ । स्थानीय बासिन्दाले नकिनेको दुई लाख ४२ हजार १० कित्ता र सर्वसाधारणहरुलाई छुट्याईएको १४ लाख ४८ हजार ४६० कित्ता गरी सो बराबरको आइपिओ बिक्री गर्न तयारी गरेको हो ।
कम्पनीले इक्रा नेपालबाट इक्रा रेटिङ्ग ’इक्रा एनपि आइपिओ ग्रेड ५’ पाएको छ । यस सूचकले कम्पनीको वित्तीय अवस्था सबैभन्दा कमजोर रहेको जनाउँछ ।
युनियन हाइड्रोपावर कम्पनीले ३५ करोड ३४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको ३५ लाख ३४ हजार ३४० कित्ता आईपिओ जारी गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।
हाइड्रोपावरले गत साउन १४ गते देखि भदौ १२ गते सम्म स्थानीय बासिन्दाले नकिनेको ६ लाख २१ हजार ७९० कित्ता सहित सो बराबरको शेयर निष्कासन गर्ने माग गरेको छ । युनियन हाइड्रोपावरको आइपिओलाई पनि इक्रा नेपालले ग्रेड ५ रेटिङ्ग दिएको छ ।
भैरवकुण्ड हाइड्रोपावरले ३१ लाख ८३ हजार २८० कित्ता आइपिओ निष्काशनको लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।
कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि २५ लाख ३३ हजार २८० कित्ता र प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको लागि ६ लाख ५० हजार कित्ता गरी सो बराबरको शेयर निष्कासन गर्नको लागि बोर्डमा आबेदन परेको छ ।
शुभम पावर लिमिटडले सर्वसाधारणका लागि ५ लाख ८० हजार ५८० कित्ता आईपिओ जारी गर्ने माग गर्दै धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ ।
यस अघि स्थानीयलाई निष्काशन गरेको आईपिओ पुरै बिक्री नभएपछि थप एक लाख ८० हजार ५८० कित्ता समेत गरी उक्त परीमाणको आईपिओ जारी गर्न धितोपत्र बोर्डमा आबेदन परेको हो ।
युनिक हाइडेल कम्पनी लिमिटेडले पहिलो चरणमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको शेयर जारी गर्ने धितोपत्र बोर्ड आबेदन दिएको छ । कम्पनीले ५ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्कासनको लागि बोर्डमा आबेदन दिएको हो ।
के हो ? इक्रा रेटिङ्ग
कुनैपनि कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा ऋण प्राप्तिका लागि निष्कासन कर्ताको ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता कमजोर छ कि छैन भन्ने छुटयाउन रेटिङ्ग संस्थाले दिएको सूचना नै इक्रा रेटिङ्ग हो ।
इक्रा रेटिङ्गले लगानीकर्ताहरुको लागि कम्पनी जोखिम प्रतिफल कस्तो अवस्थामा छ भनेर कम्पनीको सबै पक्ष हेरि रेटिङ्ग गरेको हुन्छ । क्रेडिट रेटिङ गर्दा व्यवस्थापनको सबल तथा कमजोर पक्षको मूल्यांकनको आधार हेरिन्छ ।
इक्रा नेपालले १ देखि ५ प्वाइन्ट स्केलमा ग्रेडिङ प्रदान गर्दछ । ग्रेड १ ले बलियो आधार जनाउँछ भने ग्रेड ५ ले कमजोर आधार जनाउँछ । ग्रेड २, ३, ४ मा प्रयोग गरिने प्लस चिन्हले त्यस समूहमा तुलनात्मक रुपले सकारात्मक स्थिति रहेको जनाउँछ ।
ग्रेड ५ भएका कम्पनीको आइपिओमा रोक लगाउनु पर्ने माग
लगानीकर्ताहरुले क्रेडिट रेटिङ ग्रेड ५ भएका जलविद्युत कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनमा रोक लगाउनु पर्ने माग समेत गर्दै आइरहेका छन् । तर पनि यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्न चहाने ठुलै भिड देखिन्छ ।
धितोपत्र बोर्डले समते लगानीकर्ताहरुलाई बारम्बार आइपिओ निष्कासन गरेका कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणहरु राम्रोसंग अध्ययन गरेर लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।